Xirfadaha BGA | BGA
BGASUMMER @ Bogga Guriga
Taariikhda iyo Himilada
BGA ee Wararka
Maamulka iyo Warbixinta
Tilmaamaha iyo Baarkinka
Diiwaangelinta, Dhacdooyinka, iyo Taariikhda Taariikhaha
Su&#39;aalaha inta badan la isweydiiyo
Xiriirinta codsiyada tarjuman
Taariikhaha Guriga Furan
Ilaha bilaashka ah iyo qiime jaban
Aspen iyo Jupiter Login
Qalabka Tixraaca Qoyska
Labiska (Dugsiga Dhexe) iyo Dharka Dharka
Waxbarashada Gaarka ah iyo ogeysiisyada ELL
Baadhitaano loogu talagalay waalidiinta
Kooxda Taageerada Ardayda
Waayeelka iyo ardayda jaamacadaha taageera
Naadiyada Ardayda iyo Kooxaha
Kuleejka iyo Shaqada
Jadwalka barashada Virtual
Xirfado ka dhigta Dugsiga Cagaaran ee Boston
Xirfad ka socota Akademiyada Cagaaran ee Boston waxay aad uga badan tahay shaqo; waa fursadaada inaad shaqo macno leh sameyso oo aad saameyn ku yeelatid nolosha dhalinyarada, maalin kasta. Boston Green Academy waxay raadinaysaa inay shaqaaleysiiso qof khibrad leh, khibrad leh, aqoonyahano wax soo saar leh ee asalkasta leh si ay ugu soo biiraan macalimiinteena hibada leh ee taageeraya himiladeena. Waxaan rajeyneynaa inaad ka fiirsan doonto inaad nagu soo biirto.
Isagoo ah Horace Mann 'oo ku yaal degmada' Charter School, shaqaalaha BGA waa shaqaale ka tirsan Dugsiyada Dadweynaha Boston, xubno ka ah Ururka Macallimiinta Boston iyo waaxaha kale ee gorgortanka lagu dabaqi karo, oo waxay helayaan magdhow iyo faa'iidooyin aad u wanaagsan.
Boosaska bannaan waxaa lagu dhejiyay websaydhka Dugsiyada Dadweynaha Boston, oo laga heli karo halkan . Hubso inaad raadsato 'Green Academy' si aad u hesho boosaska iskuulkeena.
Shaqaalaynta badankood waxay dhacdaa Febraayo, Maarso iyo Abriil sannad dugsiyeedka soo socda. BGA waxay qiimeyneysaa codsiyada si gaar ah diiradda u saaraya sababta aad u rabto inaad ugu biirto bulshada dugsiga oo aan u taageerno hadafkeena. Codsiyada guud waa la niyad jabaa. Waxaan sidoo kale raadinaa codsadayaasha qiimeeyadooda iyo qaabka waxbarashadooda ay ula mid yihiin kuwayaga. Fadlan hubi inaad dib u eegto boggayaga iyo qalabka kahor intaadan dalban. Waxaan sugeynaa inaan kaa maqalno!
Boston Green Academy ma takoorto ku saleysan jinsi, midab, asal qaran, lab / dhedig, aqoonsiga lab / dhedig, qowmiyad, hanuuninta galmada, maskaxda naafonimada jidhka, da'da, abtirsiinta, jilitaanka ciyaaraha, baahi gaar ah, aqoon luqada Ingiriisiga ama ajnabiga. luqadda, ama horrumarka akadeemiyadeed.
Boston Green Academy waxay soo dhoweyneysaa ardayda kaladuwan ee awoodaha oo dhan, waxay baraan oo awood u siinayaan inay ku guuleystaan kuliyada iyo shaqada, iyo u diyaarinta inay hogaamiyaan jiritaanka bulshadayada iyo aduunkaba.
Abaalmarinta Dugsiga Sare ee Green Ribbon ee Dugsiga Sare ee loo yaqaan 'US Dept. of Education' ee ku saabsan waxqabadka cagaaran ee dugsiga iyo waxqabadka waara.